တရုတ် Wood ကကောက်ပဲသီးနှံပျံ့, Wood ကကောက်ပဲသီးနှံရေနံပျံ့, Wood ကကောက်ပဲသီးနှံမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ပေးသွင်း
Shenzhen Dituo Electronic Co.,Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Americas , Asia , Caribbean , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Oceania , Other Markets , West Europe , Worldwide ထုတ်ကုန်:61% - 70% Cert:ISO9001, CE, EMC, FCC, MSDS, REACH, RoHS, Test Report ဖေါ်ပြချက်:သစ်သားကောက်ပဲသီးနှံပျံ့,သစ်သားကောက်ပဲသီးနှံရေနံပျံ့,သစ်သားကောက်ပဲသီးနှံမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့,သစ်သားကောက်ပဲသီးနှံအနံ့ပျံ့,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > သစ်သားကောက်ပဲသီးနှံပျံ့
သစ်သားကောက်ပဲသီးနှံပျံ့ ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, သစ်သားကောက်ပဲသီးနှံပျံ့, သစ်သားကောက်ပဲသီးနှံရေနံပျံ့ ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, သစ်သားကောက်ပဲသီးနှံမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Aroma Essential Oil Diffuser 400ml ကလေးငယ်အတွက်ကောင်းမွန်သည်
2019 နောက်ဆုံးပေါ်အသစ် 120ml ထုံးစံရနံ့ကုထုံးရေနံပျံ့
300ml ပရီမီယံ Wood Grain မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့
Wood က Usb Ultrasonic အနံ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့
အိတ်ဆောင် Mini Usb Essential Oil Diffuser
Mini ကို Ultrasonic အနံ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ Usb diffuser
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီ Humidifier Ultrasonic ရနံ့ကုထုံးပျံ့
အမေဇုံလျှပ်စစ်အခန်း Aromatherapy မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့
DT-1661 ရင်ပြင်ရနံ့ကုထုံးအကျိုးသက်ရောက်မှု Aroma Oil Air Diffuser
Ultrasonic Usb အိတ်ဆောင် Aroma မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့
Walmart မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ Cool မြူ Ultrasonic အနံ့ပျံ့
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၁၇၀ * ၁၇၀ * ၁၆၆ မီလီမီတာနှင့်မာစတာပုံး - ၅၂၅ * ၃၅၅ * ၃၅၀ မီလီမီတာ / ၁၂pcs
Aroma Essential Oil Diffuser 400ml ကလေးငယ်အတွက်ကောင်းမွန်သည် ရနံ့ကုထုံးစက်၏လည်ပတ်စဉ်အတွင်းပုံမှန်အိပ်ချိန်ပမာဏနှင့်ကိုက်ညီသောဒီစီဘယ် (၃၀) ခန့်သာထုတ်လုပ်သည်။7ရောင်စုံအလင်းအိမ်, တောက်ပခြင်းမရှိဘဲနွေးပျော့ပျော့။ ရနံ့ကုထုံးအဆင့် aromatherapy စက်, atomizing humidifier ။...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၁၇၀ * ၁၇၀ * ၉၅ မီလီမီတာနှင့်မာစတာပုံးများ - ၅၂၅ * ၃၅၅ * ၄၀၀ မီလီမီတာ / ၂၄pcs
လျှပ်စစ်လေကြောင်းလတ်ဆတ်သောအမွှေးအကြိုင်ပျံ့နှံ့စက် ထုတ်ကုန်ကိုချေးနိုင်သည့်ခံနိုင်သည့် PP ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးရေတိုင်ကီအတွင်းရှိရေမျက်နှာပြင်အမှတ်အသားနှင့်ကြီးမားသောပမာဏ 300ml ရှိသည်။ ၂.၄ MHz လှို့ကြိမ်နှုန်းအားဖြင့်အရည်ရေမော်လီကျူးများသည်အအေးမိသောအခိုးအငွေ့အဖြစ်သို့ကျိုးပဲ့သွားသည်။...
အမေဇုံတွင်အကောင်းဆုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီမွှေးပျံ့နှံ့ရောင်းချမှု မင်းအဲဒီလိုဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံနေရလား ပူပြင်းခြောက်သွေ့ပြီးချောင်းဆိုးခြင်း၊ အရေပြားနှင့်ဝက်ခြံခြောက်သွေ့ခြင်း၊ ခြောက်သွေ့သောရာသီဥတု၊ ခြောက်သွေ့သောယားယံသောအသားအရေစသည်တို့ကိုပူပြင်းခြောက်သွေ့သောလေနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါ၊ မှောင်မိုက်။...
2019 နောက်ဆုံးပေါ်အသစ် 120ml ထုံးစံရနံ့ကုထုံးရေနံပျံ့ ဖိအားကိုလျှော့ချပါ၊ ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ကိုဖြေရှင်းပေးပါ၊ အသားအရေကိုစိုပြည်စေပြီးလေထုသည်လတ်ဆတ်သည်။ ကြော့ရှင်းမှုနှင့်သန့်စင်မှု၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အပန်းဖြေမှုနှင့်ပျော်ရွှင်မှု။ (ထပ်မံ၍ ထုတ်ကုန်များ - Ultrasonic ပျံ့နှံ့မှု၊ သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပျံ့နှံ့သူ၊...
300ml ပရီမီယံ Wood Grain မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ ရနံ့ကုထုံး၏အနုပညာလက်ရာဗေဒ၏ရနံ့ကုထုံးအရ nib ၏ထိတွေ့မှုကပိုမိုကောင်းမွန်သောဘဝအတွက်ဒီဇိုင်နာ၏လှုံ့ဆော်မှုနှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုပြသသည်။ အလုပ်ခွင်ထဲမှာမိသားစုထဲမှာဖိအားပေးခံရတဲ့သူတွေ၊ အိမ်သို့သွားပြီးရနံ့ကုဆေးဝါးစက်ကိုဖွင့်ပါ၊...
Wood က Usb Ultrasonic အနံ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ ပြင်သစ်ကဝေးလွန်းတယ်၊ အချစ်ကအရမ်းနီးတယ်၊ ပူနွေးသောနေရောင်ခြည်၊ စိုထိုင်းသောလေထု၊ ပြင်သစ်လဗင်န်မြေပြင်တွင်ရှိသောအနံ့ကိုစုပ်ယူရန်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောသဘာဝသက်တောင့်သက်သာရှိသည်။ အသံတိတ်အလုပ်လုပ်ခြင်း၊...
အိတ်ဆောင် Mini Usb Essential Oil Diffuser အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုဖန်တီးနှင့်ကောင်းသောအရာတို့ကိုစိုစွတ်။ အိပ်ပျော်ခြင်းကိုနှောင့်ယှက်ခြင်းမရှိဘဲအဆင်ပြေပြီးပျော့ပျောင်းသောအလင်းရောင်။ ရေကိုရေမော်လီကျူးပုံစံဖြင့်အသားအရေကိုပိုမိုစုပ်ယူနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပါ။...
Mini ကို Ultrasonic အနံ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ Usb diffuser အလင်းမွှေးရနံ့ကိုဖြန့်ဝေပြီးသဘာဝအမွှေးအကြိုင်များကိုခံစားရရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီကို aromatherapy စက်ထဲသို့ထည့်ပါ။ ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လွယ်ကူ၊ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပြီးသုံးရန်လွယ်ကူသည်။ ရေပြတ်လပ်မှု၊...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၁၅၅ * ၁၅၅ * ၁၇၀ မီလီမီတာနှင့်မာစတာပုံး - 480 * 325 * 360mm / 12pcs
ယခုအိတ်ဆောင်ရနံ့ကုထုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ Ultrasonic အက်တမ်နည်းပညာ, ဒဏ်ငွေအက်တမ်, ထိရောက်စွာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများ၏တက်ကြွပါဝင်ပစ္စည်းများကိုထိန်းသိမ်း။ ဆူညံမှုလျှော့ချရေးဒီဇိုင်း၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းခြင်း၊ တိတ်ဆိတ်မှုသည်အလုပ်လုပ်စဉ်နှင့်အိပ်နေစဉ်နှောင့်ယှက်ခြင်းမခံရပါ။...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - 120 * 120 * 245mm နှင့် Master ပုံး - 495 * 375 * 510mm / 24pcs
လက်မှတ်: ISO9001, BSCI, CE, ROHS, FCC
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီ Humidifier Ultrasonic ရနံ့ကုထုံးပျံ့ အသံတိတ် aromatherapy သည်သဘာဝအားဖြင့်သင့်ကိုနားလည်သည်၊ နွေရာသီလေအေးပေးစက်မိတ်ဖက်, moisturizing နှင့်ဓါတ်ကိုပြန်လည်။ Decompression, ပွော့နှင့်အပန်းဖြေ။ အလင်းသည်နူးညံ့။ အလင်းရောင်မရှိ (switchable lights) ဖြစ်သည်။...
အကောင်းဆုံးအရောင်းရဆုံး Amazon အကောင်းဆုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံအနံ့ပျံ့ နေ့ရောညပါသင်နှင့်အတူကျွန်ုပ်နှင့်အတူလိုက်ပါနိုင်မည် ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်သည်လှပသောညသို့ပြန်သွားနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ငါဟာမင်းရဲ့လက်ထဲမှာငါပေးခဲ့တဲ့ပန်းပွင့်နဲ့တူတယ်။ နတ်သမီးပုံပြင်ကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ဖို့မလုံလောက်ဘူး။ ဒါကိုကြည့်လိုက်ပါ။...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၁၇၀ * ၁၇၀ * ၂၂၅ မီလီမီတာ; မာစတာပုံး: 525 * 355 * 470mm / 12pcs
အမေဇုံရနံ့ကုထုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့အပေါ်ပူရောင်း နွေးထွေးသောစောင့်ရှောက်မှု၊ Mi Cai မီးထွန်းလိုက်၊ နေ့တိုင်းချစ်မိနေသည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သောရေအခိုးအငွေ့သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများ၏သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများကိုမထိခိုက်စေဘဲပျံ့နှံ့စေသည်။ ရိုးရှင်းသည့်ဒီဇိုင်းပုံစံ၊ အမျိုးမျိုးသောမြင်ကွင်းများသက်ဆိုင်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း,...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၁၇၀ * ၁၇၀ * ၁၄၅ မီလီမီတာနှင့်မာစတာပုံး - 525 * 355 * 310mm / 12pcs
Timer ချိန်ညှိခြင်းနှင့်အတူအမေဇုံသစ်သားအစေ့ရေနံပျံ့ လရောင်သည်ပြတင်းပေါက်ရှေ့တွင်တောက်ပနေပြီးညနေခင်းလေသည်မျက်ခွံပေါ်သို့ပျံသွားပြီးမွှေးသောအခိုးအငွေ့နှင့်လေထဲတွင်ပျံ့နှံ့သွားသည်။ Ultrasonic အလွန်ကောင်းသောအခိုးအငွေ့နည်းပညာသည် ၂.၄ MHZ...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၁၅၅ * ၁၅၅ * ၁၇၀ မီလီမီတာ; မာစတာပုံး: 48 * 32.5 * 36cm / 12pcs
အမေဇုံလျှပ်စစ်အခန်း Aromatherapy မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ Ultrasonic တုန်ခါမှုနည်းပညာသည်ရေတိုင်ကီရှိသန့်ရှင်းသောရေကိုအမှုန်များအဖြစ်သို့လျင်မြန်စွာအက်တမ်များ၊ နူးညံ့စွာချောမွေ့စေပြီးအရေပြားကိုပိုမိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေသည်။ အနီရောင်နှင့်အိပ်မက်ဆိုးမက်ဖွယ်ကောင်းသောမွှေးကြိုင်သောရနံ့ကုထုံးအချို့ကိုထည့်ပါ၊...
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဘို့သစ်သားအစေ့အမေဇုံရနံ့ကုထုံးပျံ့ ရနံ့ကုထုံးစက်သာမကစိုထိုင်းဆစက်ပါ။ ရနံ့ကုထုံးအိပ်စက်ခြင်း အသေးစားနှင့်အိတ်ဆောင် အသံတိတ်အဖော် စိုထိုင်းသောလေထု အသိဉာဏ်အလင်းကိုထိန်းချုပ် အလိုအလျောက်ပါဝါပိတ်ပါ (ပိုမိုသောထုတ်ကုန်များ - စမတ်ပျံ့နှံ့ခြင်း၊ သစ်သားကြွေပြား၊ အနံ့ဆိုး၊ Usb ပျံ့နှံ့ခြင်း၊ ကားပျံ့၊ ဖန်ထည်၊...
DT-1661 ရင်ပြင်ရနံ့ကုထုံးအကျိုးသက်ရောက်မှု Aroma Oil Air Diffuser လှပသောရနံ့ကုထုံးစက်၊ အဆင်ပြေသောဘဝ၊ ဘဝကိုမြည်းစမ်းခြင်း၊ သင်၏ဘဝအရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်ခြင်း။ ချိုမြိန်။ ခါးသောအလုပ်ကိုမလုပ်ပါနှင့်၊ သင်၏အလုပ်ကိုမွှေးကြိုင်သောဆေးနှင့်ကုပါရစေ၊ တိတ်ဆိတ်သောညတွင်အလုပ်များသောနေ့၏ခန္ဓာကိုယ်သည်သဘာဝရနံ့ကိုရှူရှိုက်ပါစေ။...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၁၇၀ * ၁၇၀ * ၁၇၅ မီလီမီတာ; မာစတာပုံး: 525 * 355 * 370mm / 12pcs
400ml သစ်သားအစေ့အရောင်ရနံ့ကုထုံးမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ 2.4MHZ ultrasonic တုန်ခါမှု၊ ရေနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီတို့ကိုနူးညံ့ပျော့ပျောင်းသောအခိုးအငွေ့အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲစေခြင်း၊ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီ၏အမွှေးအကြိုင်ကိုထိန်းသိမ်းသည်။ အနိမ့် decibel ဒီဇိုင်း, အသံတိတ်စိုထိုင်းဆ, နွေးအုပ်ထိန်းသူဖြစ်ပါတယ်။ PP...
သစ်သားအစေ့အမွှေးပျံ့နှံ့အားကောင်းသောမြူခိုးထွက်ရှိမှု ဤပူပြင်းသည့်နွေရာသီတွင်ပူသောနေပူသည်မီးနှင့်တူပြီးချွေးများထဲမှမကြာခဏပျောက်သွားတတ်သည်။ ဤပူပြင်းသည့်နွေရာသီရာသီတွင်၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအဆင်မပြေစေရုံသာမကလူတို့၏ပျင်းစရာခံစားချက်ကိုလည်းပေးစွမ်းလိမ့်မည်။ ခံစားမှု။ နွေ ဦး...
Ultrasonic Usb အိတ်ဆောင် Aroma မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့ သင်နှင့်သင်၏မိသားစုအားကျန်းမာစေသည့်အာဟာရဖြစ်စေရန်လုံလောက်သောအနုတ်လက္ခဏာအောက်စီဂျင်အိုင်းယွန်းများကိုအမြဲတမ်းထုတ်ပေးပါ။ ရနံ့ကုထုံးစိုထိုင်းဆ၊ လန်းဆန်းစေသည့်ပျော်ရွှင်သောခံစားမှု၊ ဘဝ၏အရှိန်အဟုန်ကိုနှေးကွေးစေခြင်း၊ ရပ်တန့်ခြင်း၊...
Walmart မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ Cool မြူ Ultrasonic အနံ့ပျံ့ 500ml ရေတိုင်ကီအနံ့ပျံ့ မှုန်ရေမွှား Mode Nebulizing ပျံ့: Ocean Mist / Normal ဖြတ်ပိုင်းမ သုံး Modes အိမ်မှာရနံ့ပျံ့: 1H / 3H / 6H / ON diffuser အော်တိုပါဝါပိတ်သောအခါရေမရှိ ပျော့ပျောင်းသောညအလင်းရောင်အနံ့ပျံ့များ7အရောင်ပြောင်းလဲခြင်း LED အလင်းများ...
ထုပ်ပိုး: အတွင်းသေတ္တာ - ၁၁၀ * ၁၁၀ * ၂၃၅ မီလီမီတာနှင့်မာစတာပုံး - 460 * 350 * 490mm / 24pcs
LED အလင်းနှင့်အတူအနံ့ရနံ့စက်ပျံ့နှံ့ ဤသည် ultrasonic မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံပျံ့အံ့သြဖွယ် multifunction device ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ရနံ့ကုထုံးအတွက်၎င်းကိုအသုံးပြုသည်အပြင်၊ ဤမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီပျံ့နှံ့မှုသည်လေသန့်စင်ခြင်းနှင့်လေထုစိုထိုင်းစေသည့်အရာအဖြစ်လည်းလုပ်ဆောင်သည်။ သင်၏အိမ်လေထုနှင့်လေထုအရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်ရန်၊...
တရုတ်နိုင်ငံ သစ်သားကောက်ပဲသီးနှံပျံ့ ပေးသွင်း
ထူးခြားတဲ့မော်ဒန်ဒီဇိုင်း။ သစ်သားစပါးကို finish ကိုအတူပုံပန်းသဏ္ဍာန်, Wood ကကောက်ပဲသီးနှံပျံ့အိမ်မှာခန်း, ရုံး, ဟိုတယ်, ယောဂ, စသည်တို့များအတွက်အလှဆင်အပိုင်းအစနိုင်ပါတယ်။
ပြောင်လက်တောက်ပသောထိုအပြိုးပြိုးပြက်ပြက်နဲ့ LED မီး။ သစ်သားကောက်ပဲသီးနှံအနံ့ပျံ့ (တောက်တောက်နဲ့မီးမှိန်) 14 အရောင်ပြောင်းလဲနေတဲ့ညဥ့်အလင်းအိမ်ရှိပါတယ်, သင်တဦးတည်းပုံသေအရောင်က 14 အရောင်များမှတဆင့်သံသရာကသို့မဟုတ်မသတ်မှတ်နိုင်ပါ။ အဆိုပါရောင်စုံအလင်းတစ်ဦးရင်ခုန်စရာလေထုခြင်း။
လေသံတိုးတိုး-တိတ်ဆိတ်။ သစ်သားကောက်ပဲသီးနှံရေနံပျံ့အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်အခါ, က, သင်သည်အလုပ်လုပ်သင်ယူခြင်းနှင့်အိပ်ပျော်လျက်နေကြသည်ကိုနှောင့်အယှက်မပေးပါဘူးအလွန်တိတ်ဆိတ်ဖြစ်ပါတယ်။
လှငျအော်တို Shut-ချွတ်။ သစ်သားကောက်ပဲသီးနှံမရှိမဖြစ်ရေနံပျံ့ပိတ်အလိုအလျောက်ရေတိုင်ကီ, ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်. မပါစိုးရိမ်ရေတိုလိမ့်မည်သည့်အခါ။
timer ပြင်ဆင်မှုအားထိုအမြူခိုးထိန်းချုပ်ရေး။4timer- 1 နာရီ / 3H / 6H / အဆက်မပြတ် Modes သာ။ ,2စက္ကန့်များအတွက်မြူခိုးခလုတ်ကိုနှိပ်ပါခိုင်မာတဲ့အခိုးအငွေ့တ Beep အားနည်းခိုးအငွေ့နှစ်ခု Beep ။
Aromatheray ပြီးတော့ Humidifier ။ ရေထဲသို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီ 3-5 ပေါက်ပေါင်းထည့်ခြင်း, သင့်အခန်းထဲမှာချစ်စရာကောင်းတဲ့အမွှေးအကြိုင်တွေနဲ့ဖြည့်ပါလိမ့်မယ်, ပြီးတော့သင်ရနံ့ကုထုံခံစားနိုင်။ ပျံ့ကိုလည်းပိုပြီးအစိုဓာတ်ကိုထည့်သွင်းဖို့အဆီများမရှိဘဲ humidifier အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်နိုင်ပါသည်။
စုံလင်သောလက်ဆောင်များ။ အနံ့ပျံ့လက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်, သင်သည်သင်၏မိသားစု, ချစ်သူများနှင့်မိတ်ဆွေများကပေးနိုင်ပါသည်။